ဘလူးတုသ်ဘုန်းကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း Scooter - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ဘုန်းကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း Scooter ဘလူးတုသ်
ပေမယ့်, ထူးမြတ်သောအရောင်အနညျးလမျးတစျခုအလားအလာမဆိုထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားမှုကိုပယ်ရန်ကာစစ်မှန်သောနှင့်စနစ်တကျ-ကြည်ကြည်ရောင်းချသူထံမှမဝယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနည်းလမ်းကသင့်ချဉ်းကပ်မှုဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်နှင့်လမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်ကြောမှပတ်သတ်ပြီးအများကြီးစိတ်ပူရန်မလိုပါ။ အဆိုပါ2ဘီးထပ်ဆင့်တင်ခြင်း Scoote Powerboard`s ဘက်ထရီသက်တမ်းအားဖြင့် r ကိုမှန်ကန်ဖြစ်တယ်, သင်ကဲ့သို့ကြင်ခပ်သိမ်းသောကာလမှာဒီယူနစ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျဘက်ထရီများ၏စွမ်းရည်အဆင့်ကိုတွေ့မြင်ဖို့အတွက်ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်ရှိပါတယ်ရသော Scooter အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ သင်ဒီမှာဖတ်နိုင်ရာဘီးတပ်ကုလားထိုင်, Mobility ကို AIDS ရောဂါနှင့်အခြားစွမ်းအင်-တွန်း Mobility ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများများအတွက် ADA လိုအပ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ ဒီတော့ 8.5inch သင်ယူ မတ် Balance စကူတာဘလူးတုသ် ဒီမှာအဘို့အစျေးဝယ်မတိုင်မီ hoverboard ကြီးတွေဘီး K7 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ဤတွင်ဒီနံပါတ်ကိုအကျဉ်းဖော်ပြပေးa​​nice အကဲဖြတ်ဗီဒီယိုကိုပါပဲ။ သင့်ရဲ့ကျွန်တော်ပြုစုအဆိုပါခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အပေါ်လေ့လာသင်ယူကြောင့်အမေရိကန်အတွင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှသငျသညျကိုချိတ်ဆက်ပါမယ်ပြီးနောက်ဖက်ရှင်အတွက်မောက်စ်တင်တွင်ကျနော်တို့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖို့သင်တို့အပေါ်မှာလင့်ထားသည်
သငျသညျတစ်ခုတည်းကိုသာအပန်းဖြေမှုအတွက် Scooter ၏အသုံးပြုမှုကိုထူးခြားတဲ့စေချင်သင့်တယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းညှိ hoverboard အလုံအလောက်ထက်အလိုတော် သာ. ကြီးမြတ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါဆိုင်ကယ်အားလုံးမြေပြင်အနေအထားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျရွှံ့, ဆီးနှင်း, လမ်းများနှင့်သဲမျက်နှာပြင်၌သူတို့ကိုအသုံးချသင့်ပါတယ်။ ပထမတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းညှိ hoverboard k7 ကမ်းခြေစီးနင်းဘို့ရာအသင့်လျော် 8.5inch ကြီးတွေဘီးနဲ့ off-လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကောင်းစီးနင်းအတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာ 500W မော်တာ, အားကြီးသောတန်ခိုးအား။ တတိယကို dual system ကို Motherboard က, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြီးနောက်-ရောင်းအားဟာထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ အပြင်ကပုဂ္ဂလိက mode ကိုတစ်ခုဖြစ်သည် သီးသန့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန် , မူပိုင်ခွင့်ကိုပိုမိုထူးခြားတဲ့။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အုပ်စုတစုကသူတို့အသုံးပြုခြင်းကိုတရားဝင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဥပဒေပြုအမတ်များနှင့်အတူလက်၌အလုပ်လက်ထောက်ခံ။ သင်တဦးတည်းကိုဝယ်သင့်သလော ဒါကြောင့်သင်က hoverboard ဝယ်ယူရန်မတိုင်မီ၎င်း၏ဘက်ထရီကိုထိရောက်စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အားသွင်းယူနစ်နှင့်တကွကြွလာကြောင်းအာမခံပါသည်။ က Ul2272 အတည်ပြုလွန်ခဲ့သလဲ
Hoverboard အားဖြင့် Powerboard ထွက်ရှိဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအကုန်အကျ Self-ဟန်ချက်ညီဆိုင်ကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့မေးခွန်းကလူတိုင်းရဲ့တောငျးဆိုဖြစ်ပါသည်: "ဒါဟာတန်ဖိုးစျေးနှုန်း? အဆိုပါ Koowheel Scooter စျေးနှုန်းထိန်းညှိမိမိကိုယ်မိမိ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါတယ် .တကယ်တော့, Koowheel ဖောက်သည်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အနိမ့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်စေပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကစီးနင်းအငယ်လေးတွေရှိလိမ့်မည်ဆိုပါက၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်ရေးပါပဲ။ အဆိုပါ ကိုယ်ပိုင်မျှတသော Scooter K8 KOOWHEEL နေဖြင့်သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်ရုံသင်ဤဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်စီးသော်လည်းတစ်စုံတစ်ခုမှအပေါ်ကိုကိုင်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်ယုံကြည်ပါတယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အင်္ဂါရပ်များ:
မီလန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Hoverboard K8 ကြောင့်မူလကအီးယူဈေးကွက်စိတ်ကြိုက်ရဲ့
အလွယ်တကူသယ်ဆောင် Hidden လက်ကိုင်ဒီဇိုင်း,
လမ်းဘီးဒီဇိုင်းဟာ Off အလွယ်တကူပျမ်းမျှမော်ဒယ်များအကြားမျက်စိဖမ်း
Hoverboard K8 ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်စံဖြစ်နေဆဲ
မော်တော်, အားသွင်းကိရိယာ, PCB အဘို့ကိုသာထိပ်တန်းပေးသွင်းကိုသုံးပါ
အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော 24V 6.5inch hoverboard
ဒါကြောင့်ဒီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိ Scooter ကတော့မြင်းစီးသူရဲများအတွက်အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေး features တွေထဲကရှိပါတယ်။ ထိုအခါ swegway အပေါ်တဦးတည်းခြေထောက်ထားတော်မူ၏။ ထိရောက်နှင့်ထိုက်တန်ချေရန်အဆင်သင့်တစ်ခုခုလိုခငျြသောသူတို့အဘို့, သို့ဖြစ်လျှင်ဤသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-29-2017